Xiaomi waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo leh kaamiro ka wanaagsan midka Mi CC9 Pro | Androidsis
Waa in la ogaadaa in shirkad sida Xiaomi ah ay sii wadi doonto inay ku cusbooneysiiso suuqa taleefannada casriga ah iyada oo leh telefoonno fiican sida waqtiga u dhacayo. Taasi waa sababta aan haddaba u hayno warbixinno taas tilmaamaya waxaa dhawaan looga adkaan doonaa mobiil ka fiican kan My CC9 ProIlaa inta laga hadlayo qaybta sawir qaadista, iyo sidoo kale qaybaha kale sidoo kale, dabcan.
Aynu xusuusano in Xiaomi Mi CC9 Pro uu yahay terminaal aan muddo dheer suuqa ku jirin. Tan waxaa la bilaabay dhowaan, Nofeembar 5, iyo waxa ugu fiican uguna cajaa'ibka badan ee ku saabsan qalabkan waa nidaamkeeda kamaradda penta, oo uu hoggaamiyo a 108 MP sensor; Tani waa waxa soo saaraha Shiinaha uu damacsan yahay inuu ku hagaajiyo mid ka mid ah moodooyinka soo socda.
Sida laga soo xigtay abuuraha daadanaya ee Shiinaha oo lagu kalsoon yahay @Datital Chat Station, Xiaomi waxay leedahay taleefan sawir ku saleysan sawir-qaadid ah oo horumarineed oo ka fiicnaanaya Mi CC9 Pro waxqabadka kamaradda. Ma muujineyso macluumaad kale oo ku saabsan aaladda, laakiin waxay ku dareysaa inaan awoodno inaan helno faahfaahin dheeri ah inta lagu jiro dhacdada Xiaomi ee AIoT.
Waxyar kadib markaan sharaxay seddex sababood oo loo iibsado waxqabadka sare ee lagu magacaabay bartamaha-dhexaadka, waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa waxa DXoMark ay ka duubtay tijaabooyinka kamaradda ee Mi CC9 Pro ... laftiisa laftiisa, dokumentigiisa wuxuu ku iftiimiyay kamaradda dambe ee cajiibka ah ee ay leedahay, taasoo inta badan ka kooban 108 megapixel Samsung ISOCELL Bright HMX, taas oo ah dareemaha aasaasiga ah ee ka duwan telefonada kale ee casriga ah. Maaha wax aad u cajaa'ib badan in la aamino in leh 121 dhibic xariggan uu ku xidhan yahay Huawei Mate 30 Pro sida ugu fiican dhammaantiis qiimeynta taleefannada casriga ah ee leh kamaradda ugu fiican maanta.
Weli waa la arki doonaa waxa Xiaomi ay ku diyaarinayso qalabkeeda soo socda, maadaama aan aad u xiiseynay in wax yar ka dib markii la bilaabay Mi CC9 Pro ay mid kale ku helayso qaab sawir fiican leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi ayaa soo bandhigi doonta taleefan casri ah oo kaamirad ka wanaagsan kan Mi CC9 Pro dhawaan